पुरुषले खाने गर्भनिरोधक चक्की ! - Dainik Nepal
'कन्डम र भ्यासेक्टमी मात्रै रहेको अवस्थामा यो चक्की स्वागतयोग्य हुनेछ'
दैनिक नेपाल २०७५ चैत २१ गते १६:२५
काठमाडाैं । पुरुषले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की मानवमा गरिने सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षणमा सफल भएको दाबी एउटा प्रसिद्ध चिकित्सकीय सम्मेलनमा दाबी गरिएको छ। दैनिक एक चोटि सेवन गर्नुपर्ने सो चक्कीमा शुक्रकीटको उत्पादन रोक्ने हर्मोन हुन्छ।
पुरुषहरूका लागि परिवार नियोजनका लागि कन्डम र भ्यासेक्टमी मात्रै रहेको अवस्थामा यो चक्की एउटा स्वागतयोग्य साधन हुनेछ। तर एन्डोक्राइन सोसाइटीको वार्षिक सम्मेलनमा सो चक्की बजारमा उपलब्ध हुन अझै एक दशक लाग्न सक्ने बताइएको छ।
यूकेमा ५० वर्षभन्दा अगाडि महिलाहरूले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की उपलब्ध भएको थियो। तर किन पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बन्न गाह्रो भएको होला ?
कसैले सामाजिक र व्यापारिक रुचि कम भएका कारण नबनाइएको दाबी गरे पनि सर्वेक्षणहरूमा धेरै पुरुषले उपलब्ध भए त्यस्तो चक्की प्रयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
महिलाहरूले पुरुषले चक्की खाएको कुरा पत्याउँछन् कि पत्याउँदैन्न भन्ने अर्कै विषय हो। सन् २०११ मा यूकेमा गरिएको एक अध्ययनमा झन्डै आधा महिलाले त्यस्तो चक्की उपलब्ध भएमा आफ्ना पुरुष साथीले त्यो खाए वा नखाएकोमा चिन्ता लाग्ने बताएका थिए।
पुरुषले सेवन गर्ने चक्की बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको त्यसले यौन इच्छा वा उत्तेजनामा असर नपार्ने बनाउनु हो।
पुरुषको अण्डकोषमा नियमित शुक्रकीट उत्पादन हुन्छ। त्यसमा हर्मोनको विशेष भूमिका हुन्छ।
हर्मोनको मात्रा नघटाई अरू कुनै नकारात्मक प्रभावबिना नै शुक्रकीटको उत्पादन अस्थायी रूपमा रोक्नु प्रमुख चुनौती हो।
हाल एलए बायोमेड र वाशिङ्टन विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको उक्त चक्कीले भने सोचिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धाकर्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले चालीस पुरुषमा भएको प्रारम्भिक सुरक्षापरीक्षण उत्साहवर्धक रहेको एन्डोक्राइन सोसाइटीको सम्मेलनमा बताए ।
२८ दिन चलेको अध्ययन
१० पुरुषले नक्कली चक्की सेवन गरेका थिए । ३० जनाले परीक्षणका लागि बनाइएको चक्की सेवन गरेका थिए । एन्ड्रजन हर्मोनमा आधारित चक्की सेवन गरेकाहरूमा शुक्रकीट उत्पादनका लागि आवश्यक हर्मोनको स्तर नक्कली चक्की सेवन गरेकाको तुलनामा निकै कम रहेको थियो भने परीक्षण सम्पन्न भएपछि सामान्य अवस्थामा फर्केको थियो।
उक्त चक्कीको दुष्प्रभाव निकै कम र मन्द देखियो। पाँच पुरुषले चक्कीको प्रयोगपछि यौन इच्छामा कमी आएको बताएका थिए भने दुई जनाले लिङ्गमा हुने उत्तेजनामा कमी आए पनि यौन क्रियाकलापमा भने असर नपरेको जानकारी दिए।
अनुसन्धानमा संलग्न भएका सबै सुरक्षापरीक्षणमा उत्तीर्ण भए भने दुष्प्रभावका कारण कसैले पनि उक्त चक्की सेवन गर्न छोडेनन्।
अनुसन्धानमा संलग्न रहेकी प्राध्यापक क्रिस्टिना वाङ र उनका सहकर्मी उत्साहित रहे पनि निष्कर्षबारे भने सचेत रहेका छन्। ‘हर्मोनका दुईवटा गतिविधिको सम्मिश्रण रहेको चक्कीले शुक्रकीटको उत्पादन घटाउनेछ भने यौन इच्छामा भने कुनै किसिमको प्रभाव पार्नेछैन।’, उनले भनिन्।
तर यसले जन्म नियन्त्रण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा थाहा पाउन लामो समयसम्म परीक्षण गर्नुपर्ने खाँचो रहन्छ।
पुरुषले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्कीमा औषधि उद्योगहरूले लगानी नगरेका कारण विकासमा बाधा परेको मानिन्छ।
शेफिल्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एलान पेसी भन्छन्, ‘पुरुषले सेवन गर्ने गर्भ निरोधक चक्कीको लामो असफल इतिहास छ र अहिले नयाँ उत्पादनहरूको परीक्षण हुनु सुखद कुरो हो।’ –बीबीसीबाट